सं’क्रमित आमाको दूधबाट बच्चामा सं’क्रमणको ख’तरा हुन्छ ? यस्तो भन्छन् डब्ल्यूएचओ [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ] – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/सं’क्रमित आमाको दूधबाट बच्चामा सं’क्रमणको ख’तरा हुन्छ ? यस्तो भन्छन् डब्ल्यूएचओ [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ]
काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेयसुसले को’रोना भा’इरस (कोभिड-१९) सं’क्रमित आमाहरुलाई आफ्नो नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन नछा’ड्न आग्रह गरेका छन् । जेनेभामा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै उनले अध्ययनमा बच्चालाई आमाको दूध को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणको जो’खिमको तुलनामा धेरै लाभदायक पाइएको बताएका हुन्।
सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘ठूला मानिसको तुलनामा बच्चालाई कोभिड-१९ को जो’खिम कम हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, अरु धेरै रो’गहरुबाट बच्चाहरुलाई धेरै जो’खिम हुन सक्छ र स्तनपानबाट यस्ता रोगहरुलाई रोक्न सकिन्छ । अहिलेको प्रमाणअनुसार डब्ल्यूएचओ यो सल्लाह दिन्छ कि को’रोना भा’इरसको संक्र’मणको जो’खिमभन्दा स्तनपानको फाइदा बढी हुन्छ।’
गेब्रेयेसुसले सं’क्रमित वा शं’का’स्पद सं’क्रमित आमाको अवस्था ग’म्भीर नभएसम्म नवजात शिशुलाई उनीहरुभन्दा टाढा राख्न नहुने बताएका छन्। डब्ल्यूएचओकी एक सल्लाहकार डाक्टर अंशु बनर्जीले अहिलेसम्म आमाको दूधमा को’रोना भा’इरसको जीवित भा’इरस भएको नपाइएको बताइन्।
अमेरिकाको रोग निय’न्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी)ले नवजात शिशुको लागि आमाको दूध सर्वोत्तम आहार भएको बताएको छ । सीडीसीले आमाको दूधबाट को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिने सम्भावना नरहेको अहिलेसम्मको तथ्यांकले देखाएको बताएको छ । यद्यपि आमाबाट बच्चामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण नसरोस् भन्नका लागि आमाले बारम्बार हात धुने र आफ्नो मुख ढाक्नुपर्ने सीडीसीले बताएको छ।